Saka mitengo yakwira kuSpain kubva kuiyo iPhone 4 [graphic] | IPhone nhau
Iyi ndiyo nzira yakakwira mitengo muSpain kubva ku iPhone 4 [graphic]
Haisi nguva shoma kuti iwe unzwe kuti iyo iPhone inodhura. Muchokwadi, iwe unogona kunge uchifunga saizvozvo futi. Gore rega rega, nekusvika kwemakambani matsva emakambani, isu takamirira takatarisira nguva iyo yavanoshambadza mitengo yavo pachiitiko chekuratidzira. Zvimwe zvakafanana zvakatoisa kenduru semunamato kuitira kuti kusimuka kusanyanya kunyanyisa.
Nekuti, hongu, imwe ye "manias" iyo Apple ndeyekugara uchisimudza mutengo wePhones. Neimwe nguva yekudzikama kwakaringana umo mutengo unosara, mutengo wavo unokwira zvishoma nezvishoma gore rega kana makore maviri ega ega, zvinoenderana ne. Kubva maPhones ekutanga anogona kutengwa zviri pamutemo muApple Chitoro kuSpain, nguva yakareba yapfuura - kana pamwe kwete zvakanyanya - izvo zvinotibvumidza kuona nekujeka kukuru kuwedzera uku mumutengo wezvigadzirwa sezvave kuitika.
1 Chinhu chinodhura
2 Kunyangwe riinhi?
Nezuro, nekumisikidzwa kweiyo nyowani iPhone 7 uye 7 Plus, takaona kuti mitengo yePhones muSpain yakakwira zvakare zvishoma zvichienzaniswa nezera rapfuura. Iwo 32GB base mamodheru anotanga pa769 uye 909 euros, zvichiteerana. inova mari yakati wandei kana tichifunga kuti makore maviri apfuura, neiyo iPhone 6 ne6 Plus mitengo yaive 699 uye 799 euros.
Kana paine chimwe chinhu chiri pachena kwatiri, ndechekuti isu hatigone kuita zvakawanda pamitengo yemusika, asi isu tinoshamisika kana Apple inogona kuita chimwe chinhu kudzikisira mhedzisiro yeiyi kuwedzera iyo, zvishoma nezvishoma, iri kunyatso kuoneka. Kuti uenderere mberi seizvi, mumakore akati wandei isu taigona kuwana base base modhi yaizobata 800 euros yeiyo 4,7-inch iPhone uye chiuru cheiyo Plus. Panguva ino, isu tinogona chete kutaura nezve izvo zvatakatosangana nazvo uye, kuti iwe ugone kuona zviri nani shanduko yemitengo yemhando dzakasiyana kubva ku iPhone 4, takagadzirira girafu iri tichienzanisa iwo ese.
Mariri iwe unogona kuona mitengo yekutengesa yeiyo iPhone base mamodheru kubva ku iPhone 4 kusvika ku7 (16GB kusvika ku iPhone 6s uye 32GB mune matsva akaunzwa nezuro) uye kuwedzera zvishoma nezvishoma kwatanga tichiona munyika medu. Pamusoro pe, Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuwedzera kweiyo yakawanda VAT muna2012, kwayakabva kubva pa18% kusvika pa21%, chimwe chinhu chakajeka zvakare chakakonzera kusimuka kuri kuoneka. Musiyano unoyemurika, uye zvakanyatso kuoma kuona kuti nguva pfupi yapfuura sei iwe yaunogona kutenga iyo iPhone ye699 euros uye ikozvino unofanirwa kuzviitira 769 euros.
Nekudaro, kana usiri kutanga-kutora uye hauna hanya zvakanyanya usina hunyanzvi hwazvino muhomwe yako, unogona kugara wakamirira gore uye wotenga yemhando yegore rapfuura nemutengo wakaderera zvakanyanya, chimwe chinhu chinokupa iwe chishandiso icho chiri chimwe cheakanakisa pamusika pasina kukusiira iwe iyo mari iyo Apple inokumbira matemu ayo matsva. Muchokwadi, vakatosimbisa kwatiri kuti nhasi, zuva rekutanga iro dhisikaundi rave kushanda, vaenda kunotora yavo iPhone 6s kana 6s Plus ye659 / 769 euros, zvichiteerana.
Sezvatakataura, hatizive kuti tichazoona riini mitengo iyo inosara kwemakore mashoma isina kukwira, nekuti ruzivo rwunotiratidza kuti hatifanire kuva netariro zvakanyanya mune izvi. Kunyangwe, kana paine chimwe chinhu chakanaka kuve muridzi wezvigadzirwa zveApple, ndizvo izvo Izvo hazvina kuoma kuwana pini yakanaka nekutengesa yako yekare terminal kuti ubhadhare chikamu cheiyo nyowani, Ndinovonga mashandisiro anoita izvi zvigadzirwa. Hatisi kuzopinda kuti zvigadzirwa zvinotengeswa nekambani zvakadhura zvakanyanya kana kwete, asi kana chiri chokwadi kuti mutengo waunobhadhara pakutanga unosanganisira zvinhu zvakaita sechivimbiso chakasarudzika, semuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyi ndiyo nzira yakakwira mitengo muSpain kubva ku iPhone 4 [graphic]
Apple inoburitsa iOS 10 Goridhe Master kuruzhinji
Vhidhiyo yekuti iyo iPhone 7 Jet Nhema inogadzirwa sei